उद्योगी-व्यवसायीको गोप्य बैठकः नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक, प्रचण्ड दोस्रो धनी — OnlineDabali
उद्योगी-व्यवसायीको गोप्य बैठकः नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक, प्रचण्ड दोस्रो धनी
Posted on November 17, 2017 by अनलाइन डबली
काठमाडाैं । उद्योगी-व्यवसायीहरुको गोप्य बैठक सम्पन्न भएको छ । चुनावको लागि भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले तोकेरै चन्दा माग्न थालेपछि उनीहरुको आकस्मिक बैठक बसेका हुन् ।
काठमाडौँको एक स्टार होटलमा बसेको बैठकमा चुनावी चन्दा र आफ्नो अवस्थाबारे व्यवसायीहरुले छलफल गरेका थिए । एउटै पार्टीका फरक फरक नेताहरुले व्यक्तिगत चन्दा माग्न थालेपछि के गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताइएको छ । पार्टी र व्यक्तिगत चन्दाको लागि आएका पत्रहरु पनि जम्मा गरेका थिए ।
करिब दुई दर्जन उद्योगहरुको बैठकमा ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको सम्पत्तिको विवरण समेत पेश गरिएको स्रोतले बतायो । बैठकमा पेश गरिएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा धनी, दोस्रोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, तेस्रोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसका सभपति समेत रहेको प्रधानमन्त्री देउवासँग ४५ सय करोड, प्रचण्डसँग २५ सय करोड र ओलीसँग १५ सय करोड उद्योगीहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी काँग्रेसमा देउवापछि दोस्रो तहमा खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशीलाई राखिएको छ । त्यस्तै एमालेमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सम्पत्ति पनि ओलीकै हाराहारीमा रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । दोस्रो, तहमा झलनाथ खनाल, भीम रावल, इश्वार पोखरेल, महेश बस्नेतलाई राखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड जति अरु नेताहरुको सम्पत्ति नभएको बताइएपनि दोस्रो तहमा कुष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, प्रभाकर, शक्तिबहादुर बस्नेत लेखराज भट्टलाई राखिएको छ ।
“हामीले व्यवासायीक पृष्ठभूमिका नेताहरुको हिसाब राखेका छैनौं । उहाँहरुसँग हाम्रो भन्नु केही छैन तर खल्तीमा हात हालेर काठमाडौँ पसेको नेताहरुले रातारात सम्पत्ति कमाएको देखेर हामी छक्क परेका छौं” बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले स्रोतसँग भने । आफूहरुको व्यवसाय धरासायी भएर बन्द गनुृपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले भने, “हाम्रा बाजेको पालदेखि यही व्यवसाय गरिरहेका छौं, हामी संकटमा छौं भने नेताहरु फाइदामा हुनुहुन्छ । यो कस्तो उल्टो भयो, यस्तै हो भने उद्योगका तालाचाबी नेताहरुको हातमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।”
राष्ट्रिय चरित्रका उद्योगी-व्यवसायीहरु मात्र सहभागी बैठकमा काम गराउन पनि कमिसन दिनु पर्ने र चुनावमा चन्दा पनि दिनु परिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए ।
सबै क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरुले नेताहरुको आम्दानीको स्रोत र लगानीको फेरिस्त तयार गरेका छन् । नेताहरुको संरक्षणमा रहेका व्यक्ति र लगानीको पनि पहिचान गरिएको छ । तीन ठूला पार्टीका नेताहरुले ठूलो रकम चन्दा मागेकाले पहिलो चरणमा तीन पार्टीका नेताहरुको सम्पत्तिको विवरण मात्रै संकलन गरेका छन् ।
बैठकले सकेसम्म आफैसँग भएको पैसा लगानी गर्न सुझाव दिने र बाध्यात्मक अवस्थामा संस्थागत रुपमा मात्रै चन्दा लिने उद्योगी-व्यवसायीहरुबीच सहमति भएको छ ।
काँग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल सवार गाडी एम्बुसमा पर्‍यो, यस्तो क्षतिको अवस्था
एमाले-माकेका कार्यकर्ता चढेको गाडीमाथि बम प्रहार
Posted in डवली विशेष, समाचार | Leaveareply
प्रधानमन्त्रीको ‘छोरो हुँ’ भन्दै सागर थापाको ठगी धन्दा
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक शाहले पत्रकारसँग मागे माफी (भिडियोसहित)
बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्‍न अभाव, स्थानीय भन्छन्- तिहार पनि खल्लो हुने भयो
भृकुटीमण्डपमा अर्को कुटपिट काण्डः (नेकपा) को चियापान बहिस्कार गर्नुका पाँच कारण
जनयुद्धमा बादलले आफ्नो नाम ‘लखन’ किन राखे ? विप्लवले पोल यसरी खोले
नेपाली कामदारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ लुट्ने मलेसियाका गृहमन्त्री पक्राउ
कमरेड ! हामी कसरी अयोग्य ? उत्तर चाहिन्छ